တရုတ်လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ထိရောက်မှုစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေး terminal (gprs.lora) ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ | ချွေတာ
လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ထိရောက်စွာစောင့်ကြည့်သော terminal ကိုအဓိကအားဖြင့်သုံးဆင့်သောစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုအတွက်အသုံးပြုသည်။ အသုံးပြုသူများသည်စွမ်းအင်၊ စုဆောင်းမှုနှင့်ဝေးလံခေါင်ဖျားသောစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှုကိုဆောင်ရွက်ရန်အဆင်ပြေသည့် RS485 ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ဆောင်ချက်နှင့်ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေး function တပ်ဆင်ထားနိုင်သည်။ ထုတ်ကုန်သည်တိကျမှု၊ အရွယ်အစားသေး။ လွယ်ကူသောတပ်ဆင်မှု၏အားသာချက်များရှိသည်။ ၎င်းသည်စွမ်းအင်တိုင်းတာမှု၊ ကိန်းဂဏန်းများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောနေရာများနှင့်အမျိုးမျိုးသောဝန်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကိုနားလည်ရန်ဖြန့်ဖြူးရန်နေရာတွင်ပြောင်း။ တပ်ဆင်နိုင်သည်။
1.DIN ရထားလမ်း, သေးငယ်တဲ့အရွယ်အစား
3.It သည်သုံးဆင့်ပါ ၀ င်သည့်စွမ်းအင်မီတာ၏တိုင်းတာမှုလုပ်ဆောင်ချက်များရှိသည်
4. ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေး, ရိုးရှင်းသောကွန်ယက်နှင့်တည်ငြိမ်သောလည်ပတ်မှု
1. ဆက်သွယ်ရေး function ကို: စံ 1 RS485 ဆက်သွယ်ရေး interface ကို။
2.Optional module တစ်ခု
GPRS module - GPRS မိုဘိုင်းအများသုံးကွန်ယက် (2G network) ။
Lora module - NB-Lot ဆက်သွယ်မှု၊ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းသည်။
၃. အဓိကလုပ်ဆောင်ချက် - စွမ်းအင်ထိရောက်စွာစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးသည့် terminal တွင်နှုန်းထားဇယားနှစ်ခုပါ ၀ င်နိုင်သည်။ ၎င်းကိုသဘောတူထားသည့်အချိန်တွင်အလိုအလျောက်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ အချိန်ဇယားတစ်ခုစီသည် ၄ ​​ချက်နှင့် ၈ ချက်ကိုထောက်ပံ့သည်။
၄။ စွမ်းအင်ထိရောက်စွာစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးသည့် terminal သည်လက်ရှိ၊ ဗို့အား၊ တက်ကြွသောစွမ်းအား၊ ဓာတ်ပြုစွမ်းအား၊ ချက်ချင်းပါဝါ၊
၅။ အသွင်အပြင်များ - စွမ်းအင်ထိရောက်စွာစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးသော terminal သည်အဆင့် A၊ B နှင့် C တို့၏ဓာတ်ပြုခြင်းနှင့်တက်ကြွသောစွမ်းအင်နှင့်လက်ရှိအဆင့်များ A၊ B နှင့် C တို့၏ပေါင်းစပ်တက်ကြွသောစွမ်းအင်တို့ကိုတိုင်းတာနိုင်သည်။
6.Metering chip - မြင့်မားသောတိကျမှု၊ မြင့်မားသော sensitivity၊ မြင့်မားသောတည်ငြိမ်မှု၊ ကျယ်ပြန့်မှု၊ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းသောတိုင်းတာမှု chip ကိုသုံးပါ
ကိုးကားစရာဗို့အား3* 380V,3 * 100V
လက်ရှိသတ်မှတ်ချက် 5A, 100A, 200A, 300A, 400A, 600A
စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု ဗို့အားလိုင်း: <= 2W, 5VA; လက်ရှိလိုင်း: <2VA
ဆက်သွယ်ရေး RS485:2400bpsမိုက်ခရိုပါဝါကြိုးမဲ့:470MHzGPRS:900/1800MHzစံ: DL / T645-2007或မော်ဒယ်
မီတာကိန်းသေ (imp / kWh) 6400,400
တိုင်းတာခြင်း ပါဝါ +/- 1%, ထိရောက်သောတန်ဖိုး +/- 1%, + / -3℃, နာရီတိကျမှန်ကန်မှု 0.5second / day
A, B နှင့် C open-end sensors များကို A-phase, B-phase နှင့် C-phase ကေဘယ်များတပ်ဆင်ထားသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် A, B နှင့် C တို့၏ phase သုံးမျိုးအား voltages များသည် three-phase cable terminal မှရယူကြပြီးအခြား3channel များသည်အထက်နှင့်အတူတူဖြစ်လျှင်၊ installation ကိုပြီးစီးနိုင်သည်။
ရှေ့သို့ သုံးဆင့်သော LCD သည် rs485 နှင့်အတူ multi-function ကိုအီလက်ထရောနစ်စွမ်းအင်မီတာ embedded ဒစ်ဂျစ်တယ် display ကို
နောက်တစ်ခု: လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ထိရောက်စွာစောင့်ကြည့်လေ့လာရေး terminal (လိုင်း ၄ ခု)
Home Energy Monitoring System ကိုထိန်းချုပ်ပါ